စမတ်ပျံ့, Smart မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့တရုတ်နိုင်ငံ, smart ရေနံပျံ့ထုတ်လုပ်သူ
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report ဖေါ်ပြချက်:စမတ်ပျံ့,စမတ်မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့,စမတ်ရေနံပျံ့,စမတ်အနံ့ပျံ့,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > စမတ်ပျံ့
စမတ်ပျံ့ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, စမတ်ပျံ့, စမတ်မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, စမတ်ရေနံပျံ့ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Led Lamp ဖြင့်ကောင်းမွန်သောပြန်လည်သုံးသပ်မှုပြုလုပ်သော Smart Diffuser ကိုဝယ်ပါ
အကောင်းဆုံးစမတ်ဝိုင်ဖိုင် Humidifier Alexa ဖြစ်သည်
စမတ် Wifi အနံ့ရေနံပျံ့
သစ်သားအစေ့ Smart Wifi Aroma မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့
Plug နှင့်အတူအကောင်းဆုံးစျေး Tuya စမတ်ရေနံပျံ့
သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံစမတ်ပျံ့ Uk သြစတြေးလျစင်္ကာပူ
Led Lamp ဖြင့်ကောင်းမွန်သောပြန်လည်သုံးသပ်မှုပြုလုပ်သော Smart Diffuser ကိုဝယ်ပါ ရနံ့ကုထုံးစိုစိုစေသည့်အခြောက်၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ အနံ့ထွက်ခြင်းနှင့်သင်၏ဘဝကိုပိုမိုကျန်းမာစေခြင်း။ ရေရှည်တည်တံ့သောအနံ့၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းသော၊ စာဖတ်ခြင်းအတွက်ကောင်းသောမိတ်ဖက်။ နေ့တိုင်းမိုးလုံလေလုံစိုထိုင်းဆ, ကျန်းမာစိုထိုင်းဆ။...
အကောင်းဆုံးစမတ်ဝိုင်ဖိုင် Humidifier Alexa ဖြစ်သည် ၁။ မြည်းစမ်းခြင်းဘ ၀ သည်မွှေးနိုင်သည်။ ၂။ ရနံ့ကုထုံးသည်အိပ်စက်ခြင်းကိုအေးဆေးငြိမ်သက်စေသည်။ စေ့စပ်သေချာသည့်အအေးမိခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ၏မွှေးကြိုင်သောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ အမွှေးအကြိုင်ကိုအခန်းတွင်ဖြန့်ကျက်ထားသည်။...
စမတ် Wifi အနံ့ရေနံပျံ့ အရေပြားနှင့်အဆင်ပြေသောအခိုးအငွေ့၊ 2.4MHz အက်တမ်နည်းပညာသည်တစ်စက္ကန့်တွင် ၂.၄ သန်းကြိမ်နှုန်းမြင့်လှို့အဆင့်မြှင့်တင်သည်။ ရေဖြည့်ရန်အဆင်ပြေသည်၊ ရေဖြည့်ရန်မလွယ်ကူပါ၊ ခန္ဓာကိုယ်ကိုနောက်ပြန်လှည့်ရန်မလိုအပ်ပါ၊...
Smart Wi-Fi နည်းပညာ Wifi အနံ့မရှိသောဆီပျံ့နှံ့မှု သက်သောင့်သက်သာဘဝကိုမွှေးကြိုင်သောဆေးဖြင့်ကုသသည်။ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်ပဟေbusyိဆန်ခြင်းတွင်စိတ်ဝိညာဉ်၏စင်ကြယ်သောပြည်ကိုရှာဖွေရန်အတွက်ပြtroublနာများနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုများကိုဖယ်ရှားပေးပါ။ အေးဆေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုဖန်တီးရန် Aromatherapy စက်ချစ်ခင်စုံမက်ခြင်း။...
သစ်သားအစေ့ Smart Wifi Aroma မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ စက်ရုံမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ၊ သဘာဝအနံ့။ နှေးနှေးခြင်းနှင့်ဘဝ၏အရသာခံစားရသည်။ ဘ ၀ သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးစိုစွတ်ခြင်းသာမကသင်ဟာ humidifier မွှေးကြိုင်သောအနံ့အရသာအတွက်လိုအပ်သောအဆီများကိုထည့်နိုင်သည်။...
Plug နှင့်အတူအကောင်းဆုံးစျေး Tuya စမတ်ရေနံပျံ့ ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ရေကိုထည့်ပါ။ ရိုးရာရေဖြည့်စွက်နည်းကိုနှုတ်ဆက်ပါ။ သီးခြားစီပြုလုပ်ထားသောရေတိုင်ကီတွင်ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေးကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ပေါ့ပေါ့တန်တန်စိုစွတ်အောင်မစိုစေဘဲရေစိုပေးပါ။ အနံ့စိုထိုင်းစက်၏အလုပ်လုပ်သောအသံသည် ၃၅ ဒီစီဘယ်မထက်မနည်း၊ ကြီးမားသော caliber...
Shark Shape ဂူဂဲလ်၏စမတ်ကျသောဘဝရေနံပျံ့ အိမ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခိုလှုံရာ ဖြစ်၍ သက်သောင့်သက်သာရှိပြီးစိုထိုင်းသောအိမ်ကိုဖန်တီးခြင်းသည် DiTuo smart humidifier ၏အစဖြစ်သည်။ ဤအယူအဆကို အခြေခံ၍ R&D အဖွဲ့သည်နည်းပညာအသစ်များနှင့်အဆောက်အအုံအသစ်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း၊ ရေလမ်းရှိ DT-1641YN...
အကောင်းဆုံးစမတ်ရေနံပျံ့ Alexa Alexa Tuya 2019 App ကိုအသိဥာဏ်ရှိရှိချိန်ညှိနိုင်ပြီးအခြေအနေကိုအချိန်မရွေးထိန်းချုပ်နိုင်သည် အမွှေးအကြိုင်များ၊ အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်၊ အသိဉာဏ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီမွှေးရနံ့စက်နှင့်ရနံ့ကိုနားလည်သူများအတွက်သာဖြစ်သည်။ သဘာဝအမွှေးအကြိုင်ကိုခံစားပြီးအသက်ရှူပါ။ (ထပ်မံ၍ ထုတ်ကုန်များ - Ultrasonic...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၇၀ * ၁၇၀ * ၁၁၅ မီလီမီတာနှင့်မာစတာပုံးများ - 525 * 355 * 250mm / 12pcs
အကောင်းဆုံးစမတ်ရေနံပျံ့ Google Home 2018 Alexa အရှိန်အဟုန်မြန်သောဘ ၀ တွင်ဝိညာဉ်ရေးနှင့်အာရုံခံသက်သာမှုအချို့ရရှိရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရသော၊ အရောင်အသွေးစုံလင်သောအလင်းများ၊ တိတ်ဆိတ်မှု၊ APP ထိန်းချုပ်မှု၊ အသံထိန်းချုပ်မှုစသည်တို့ဖြစ်သည်။ သဘာဝဒီဇိုင်းကိုခံစားရန်အတွက်မူရင်းဒီဇိုင်းပုံစံ၊...
အကောင်းဆုံး Alexa Smart Ultrasonic နေအိမ်ပျံ့နှံ့ငါးမန်းဒီဇိုင်း အဆိုပါစိုထိုင်းဆအတှေ့အကွုံတီထွင်ခြင်းနှင့်စင်ကြယ်သောအသက်ရှုပျော်မွေ့။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရက်ရောမှုနှင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသိပ္ပံနှင့် "အသိဥာဏ်" နှင့် "အလှအပ" အကြားကြော့မျှတသောမျှတမှု အထက်ရေဖြည့်ဖွဲ့စည်းပုံသည်ရေထည့်ရန်အဆင်ပြေလွယ်ကူ။...
400ml ဂန္ထဝင်ပန်းအိုးအကောင်းဆုံးစမတ်အနံ့ဆိုးဆေး Alexa လက်ကိုင်ဖုန်းအဝေးထိန်းခလုတ်၊ မိုဘိုင်းဖုန်းက Tuya application ကိုသွင်းခြင်းဖြင့်စက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ရေနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီသည် ultrasonic atomizing tablet များ၏လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ပိုမိုနူးညံ့သောအခိုးအငွေ့နှင့်အနံ့များကိုထွက်ပေါ်စေသည်။...
Alexa Smart Home Aroma Oil အမွှေးနံ့သာပျံ့နှံ့မှု ထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှစ်ခု - Tuya application control သို့မဟုတ် voice control ။ Tuya မိုဘိုင်း APP အဝေးမှထိန်းချုပ်မှုသည်ဘဝကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ အသံထိန်းချုပ်မှု၊ အသိဉာဏ်ရှိသောအသံနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးဝါကျကိုကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲရန်မလိုအပ်ပါ။ ထိန်းချုပ်မှု၊...
သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံဝိုင်ဖိုင်စမတ်အနံ့နံပျံ့ အသံနှင့် APP ကို remote control သင့်ဘဝကိုအဆင်ပြေ: သင်၏စကားသံကိုအားဖြင့် on / off ကိုဖွင့်ဖို့ Alexa နှင့်သဟဇာတဒီစမတ်ပျံ့။ ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအချိန်မရွေးထိုသို့သောအရောင်အခိုးအငွေ့ mode ကို, အချိန် setting ကိုပြောင်းလဲစေအဖြစ် "EWELINK" App ကို,...
သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံစမတ်ပျံ့ Uk သြစတြေးလျစင်္ကာပူ စမတ်အနံ့ပျံ့ အလင်းလျှော့ပေါ့စမတ်မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့, 300ml Ultrasonic ပျံ့ Adjustments Cool မြူခိုး Humidifier, ရောင်စုံ, Alexa နှင့် Google နေအိမ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်။ ပန်းအိုးဒီဇိုင်း ရနံ့ကုထုံများအတွက်စံပြနှင့်အသေးစားခန်းနှင့်ရုံးခန်းများအတွင်းလေထု moisturizing...
စမတ်ဝိုင်ဖိုင်အမွှေးအကြိုင်ရနံ့ကုထုံမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ 300 ml ကိုစွမ်းရည်နှင့်တကွ, အံ့သြဖွယ်မွှေးရနံ့များကိုစမတ်နေအိမ်အနံ့ပျံ့လက်အားအခမဲ့ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်စုံလင်သည်။ ဤသည်မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းပေါ်သို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်များနှင့်လည်းအမေဇုံ Alexa နှင့် Google မူလစာမျက်နှာ smart home ပစ္စည်းတွေကို...
အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည်စမတ်ရနံ့ကုထုံမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ အဆိုပါစမတ်အနံ့ပျံ့ရန်သင့်ဖုန်းကိုကျေးဇူးတင်စကား့ပွတ်ဆွဲနှင့်သင်၏အိမ်သို့မဟုတ်ရုံးသို့မွှေးကြိုင်အခိုးအငွေ့ထိုးသွင်း။ သင့်ရဲ့စိတ်ဖိစီးထားတဲ့မွှေးကြိုင်သောမိုဃ်းတိမ်သို့ချက်ခြင်းအရည်ပျော်ခံစားရတယ် သင့်ရဲ့အာကာသသို့အစိုဓာတ်ကိုထိုးသွင်းရန်ဆီမပါဘဲသုံးပါ...
app / Voice ကိုထိန်းချုပ်ရေးဝိုင်ဖိုင်စမတ်အနံ့နံပျံ့ Ultrasonic အဆိုပါခေတ်သစ်မတ်ပျံ့သင့်ရဲ့စမတ်နေအိမ်နှင့် surefire အမြန်အကြိုက်ဆုံးဖို့နောက်ဆုံးပေါ်ထို့အပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကိုအဝေးကကို LED အရောင်ကနေအခိုးအငွေ့ပြင်းထန်မှုမှအရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ပုံမှန်အနံ့ပျံ့မတူဘဲ, ဒီ Wi-Fi-သဟဇာတယူနစ်သင့်ရဲ့ smartphone...
wifi စမတ် Alexa အနံ့မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ စတိုင်အနံ့ပျံ့နှင့်အသေးစား AIR HUMIDIFIER-- အဆိုပါစမတ်ပျံ့ SUPER သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်, တိတျဆိတျ, စင်ကြယ်သောအလွန်ချောမွေ့ပြောင်လက်, ကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါသည်, သငျသညျအိပ်ပျော်ဖို့ဖြေလျော့ပေးခြင်း, ပွော့ it.Very သဘာဝလူနေမှုခွန်အား, လာဗင်ဒါနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့ကလေး diffuses...
400ml ဝိုင်ဖိုင်စမတ်မရှိမဖြစ်ရေနံအနံ့ပျံ့ ထောက်လှမ်းရေးရနံ့ကုထုံ - အသိဥာဏ် powered နှင့် wifi သဟဇာတကြောင်းသင်၏အစမတ်အိမ်သို့တစ်ဦးကအကြီးအပွငျ။ ပုံမှန်အနံ့ပျံ့လိုမျိုးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ် LED မီးအရောင်, အခိုးအငွေ့ပြင်းထန်မှု, timer နေရာမှာအပြင်အဆင်များ,...
တရုတ်နိုင်ငံ စမတ်ပျံ့ ပေးသွင်း
SMART WI-Fi နည်းပညာ: သင်ဿုံ app တစ်ခု အသုံးပြု. ့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ဒီမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စမတ်ပျံ့နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်! သင့်ရဲ့အဆင်ပြေသည်စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet များအတွက်သင့်လျော်သောသော TuyaSmart app ကို Download လုပ်ပါနှင့်ပေါ်နှင့်ပိတ်စမတ်အနံ့ပျံ့လှည့်ပါသို့မဟုတ် mode ကိုပြောင်းပေးပါ။ အဆိုပါစမတ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့အမေဇုံ: Echo နှင့် Google နေအိမ်နှင့်သဟဇာတဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်လွယ်ကူသောအသုံးပြုမှုအတွက် Alexa နှင့်အတူလည်ပတ်နိုင်။
လေထုလျှော့ပေါ့: သင်တစ်ငြိမ်သက်လေထုဖန်တီးနိုင်အောင်ဒီစမတ်ရေနံပျံ့တိုင်းနေအိမ်, ရုံး, ဟိုတယ်, ယောဂစတူဒီယိုများအတွက်စုံလင်သည်။ သင်တို့သည်နောက်တဖန်ခြောက်သွေ့သောအသားအရေနှင့်နှုတ်ခမ်းကနေဆငျးရဲခံရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီကိရိယာကိုလေသန့်ရှင်းစေခြင်းနှင့် humidify ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျရှူရှိုက်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အိပ်ပျော်အနားယူနှင့်အစဉ်အဆက်ထက်ပိုကောင်းခံစားရနိုင်အောင်အဆိုပါ wifi ပျံ့ပြီးပြည့်စုံသောပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးမည်!
သင့်လိုအပ်ချက်အိုင်တီ Adjustments: ကအကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုများအတွက်ညဥ့်မှတဆင့်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်လေသန့်ရှင်းစေသော 400ml ၏ကြီးမားသောစွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ ယင်းပျံ့နှံ့၏အလင်းကိုပိတ်ထားဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းနှောက်ယှက်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မှိန်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအမြင့်ဆုံးရလာဒ်များအဘို့သင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့အခါတိုင်းကချိန်ညှိနိုင်အောင်လေ humidifier, TuyaSmart app ကိုမှတဆင့်အချိန်ဇယားကိုတိုင်မားနှင့်နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲတိုင်မားသတ်မှတ်နိုင်သည်။
ဿုံ SAFE: အဆိုပါ Dituo အနံ့ပျံ့လုံးဝအဆိပ်-အခမဲ့ဒါကြောင့်လူတိုင်းပင်သေးငယ်တဲ့ကလေးငယ်များအတွက်လုံးဝဘေးကင်းလုံခြုံစေနိုင်ပါတယ်! you` ပိုကောင်းတဲ့ night` s ကိုကြွင်းသောအရာများအတွက်အိပ်ပျော်နေသောနေစဉ်တွင်သင်တို့ကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာသင့်ရဲ့အာကာသအတွင်းနှင့်ပင်နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာသုံးနိုင်သည်။ ရေထဲကရမှာပေါ့သောအခါ, အလိုအလျှောက်အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှုများအတွက်အလုပ်လုပ်ရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်။
ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ORDER: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အဖြစ်နည်းတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုချင်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏တိုင်းလိုဖြည့်တင်းဖို့အတတျနိုငျဆုံးအဘယ်ကြောင့်ဒီအပါ! တစ်ခုခုမှားယွင်းနေတတ်လျှင်, မစိုးရိမ်ပါကျေးဇူးပြုပြီး! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျံ့များအတွက်တစ်နှစ်အာမခံပေး! ဒီတော့ we` သင်တို့အဘို့ဤအရပ်၌ပြန်လည်အကြှနျုပျတို့ကိုကိုသိပါစေ!